Photoshop PSD Fitaovana fanarenana. PSD Fanamboarana rindrambaiko. Fanamboarana Photoshop.
DataNumen PSD Repair dia ny tsara indrindra Fitaovana fanamboarana sy fanarenana Photoshop eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia afaka manamboatra ny Photoshop simba na simba PSD ary fisie sary PDD ary avereno arak'izay azo atao ny tahirin-kevitrao, amin'izay hampihena ny fatiantoka amin'ny kolikoly fisie.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,632)
Nahoana DataNumen PSD Repair?
fisie izay efa notazomiko hatramin'ny 2000. Noforonina
Endri-javatra lehibe ao DataNumen PSD Repair v2.9
Fanohanana mba ho sitrana PSD ary fisie PDD novokarin'ny kinova Adobe Photoshop rehetra.
Tohano hamerina ilay sary ary koa ireo sosona misaraka.
Tohano hamerenana ny pixel, ny refy, ny halalin'ny loko ary ny paleta misy ny sary sy ny sosona.
Fanohanana mba hamerenana ireo sary tsy voafehy sy voafintina RLE.
Fanohanana mba ho sitrana PSD sary misy halalin'ny 1, 8, 16, 32 isaky ny fantsona.
Fanohanana mba ho sitrana PSD sary miaraka amin'ny maody loko bitmap, grayscale, index, RGB, CMYK, mutlichannel, duotone, lab.
Fanohanana amin'ny fanamboarana PSD ary fisie PDD amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana amin'ny fanamboarana antontan-tsary Photoshop.
Tohano ny fampidirana miaraka amin'i Windows Explorer, mba hahafahanao manamboatra rakitra sary Photoshop miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
Tohano hahitana sy hisafidy ny PSD ary fisie PDD ho amboarina amin'ny solo-sainan'ny mpanjifa.
mampiasa DataNumen PSD Repair hamerenana ireo sary Photoshop simba
Rehefa ny Photoshop anao PSD ny rakitra sary dia simba na simba noho ny antony maro samihafa ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo amin'ny Adobe Photoshop, azonao ampiasaina DataNumen PSD Repair hijerena ny PSD rakitra ary avereno araka izay azo atao ny angona avy amin'ny fisie.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana izay simba na simba PSD rakitra amin'ny DataNumen PSD Repair, azafady fehezo ny Photoshop sy ireo rindranasa hafa mety hiditra amin'ny fisie.
Safidio ny simba na simba PSD fisie hamboarina:
Azonao atao ny mampiditra ny PSD anaran'ny rakitra mivantana na kitiho ny
bokotra hahitana ny PSD rakitra hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Default (nitranga in- DataNumen PSD Repair dia hanao scan ny loharano PSD ampidiro, avereno ny sary sy ny sosona natambatra, ary tahirizo ho fisie fisarahana sary. Ireo rakitra sary sitrana dia navadika ho lahatahiry antsoina hoe xxxx_recovered, izay xxxx no anaran'ilay loharano PSD rakitra. Ohatra, ho an'ny loharano PSD rakitra Simba.psd, ny lahatahiry output default ho an'ireo fisie sary namboarina dia ho Damaged_recovered. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny lahatahiry na kitiho ny
bokotra, ary DataNumen PSD Repair start scanning sy fanamboarana ny loharano PSD rakitra. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha ny loharano PSD Ny rakitra dia azo amboarina amin'ny fomba mahomby, ny sary natambatra ary ny sosona ao amin'ny PSD ny rakitra dia ho voatahiry ao amin'ny lahatahiry famoahana voalaza ao amin'ny dingana 3. Ary hahita boaty hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ireo fisie sary sitrana ao amin'ny lahatahiry fivoahana miaraka amin'ireo rindranasa mifanaraka aminy.
DataNumen PSD Repair 2.4 dia navoaka tamin'ny 23 Desambra 2020
DataNumen PSD Repair Navoaka tamin'ny 2.2 Novambra 6 ny 2020
DataNumen PSD Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 11 Jona 2020
DataNumen PSD Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 8 Desambra 2013
DataNumen PSD Repair Navoaka tamin'ny 1.4 aprily 24 ny 2008
Fanohanana feno amin'ny Windows Vista.
Navoaka tamin'ny 1.1 Novambra 22 ny Advanced Photoshop Repair 2005
Navoaka tamin'ny 1.0 Jolay 12 ny Advanced Photoshop Repair 2005
Fitaovana matanjaka haverina amin'ny laoniny ny sary Photoshop maloto (PSD, PDD) fisie
Amboary sy avereno ny AutoCAD simba DWG raki-daza